Iindaba -Ingaba isebenza njani ingxowa yokuhluza
Umzobo oCwangcisiweyo weBlue filter
Umqokeleli Wothuli Umqolo omnye weebhegi (umbono weCandelo)
umgca opheleleyo we-Bag Filter unikezela isisombululo esisebenzayo nesisebenzayo sokucoca umoya othulini, oveliswe yinkqubo yezityalo, isililo yokugcina, ukufumana umgqomo, umxube, isomisi, iBelt yokuhambisa, iScreen njl.Umoya nothuli unokuvelisa umsebenzi ongathandekiyo, nokuba uyingozi. okusingqongileyo.
Iifilitha zeengxowa zincedile ekuqhubeni izityalo ngolawulo lweebhodi zokulawula ungcoliseko ngokulawula ungcoliseko lwezityalo nakwindalo. Ukongeza koku, ezi nkqubo zinceda ukunciphisa ingozi yomsebenzi.
Umgaqo wokuSebenza wecebo lokucoca ulwelo
Umoya kunye namasuntswana othuli phantsi kokutsalwa okanye uxinzelelo lungena kwinxalenye esezantsi okt i-hopper ye-bag filter.
Umoya uhamba ngebhegi yokuhluza, egcina amasuntswana othuli kumphezulu wengxowa, kwaye umoya ococekileyo udlula ngaphandle kweengxowa kunye ne-plenum kwindawo yokuphuma ye-Bag filter.
Uthuli luqokelelwa ngaphandle kwisihluzi sebhegi
Ukuqokelelwa kothuli ezingxoweni kubangela ukwanda koxinzelelo umahluko kwiingxowa zokucoca ulwelo. Umoya oxinzekileyo utsalwa sisicatshulwa esisebenza ngexesha lesivalo sezivalo zokubetha ezivaliweyo kumakhefu acwangcisiweyo abangela ukuba kuvulwe izivalo.
Ukukhawuleza komoya oxinzelelekileyo okomzuzwana (ibha ye-4-5) kuhamba ukusuka kwintloko yomoya oxineneyo ukuya kwityhubhu yokuvuthela kwaye ugxothwe kwityhubhu yokuqhushumba ngemibhobho kwisantya esiphezulu (ukuhamba komoya okuphambili). Umoya ovela kumbhobho ngamnye ubangela ukuhamba komoya kwesibini. Iziphumo ezidityanisiweyo zomoya oyintloko kunye nokungeniswa kwesibini kubangela ukunyuka koxinzelelo kwangoko kwicala elicocekileyo leengxowa zokucoca ulwelo, kubangele ukubuyela umva komoya ojikelezayo kwiingxowa zokucoca ulwelo, ngaloo ndlela kukhutshwa amasuntswana othuli agcinwe kubuso bangaphandle beengxowa.
Ngale ndlela, uthuli oluqokelelweyo lukhutshwa ezingxoweni kwaye luwela kwi-hopper kwaye uxinzelelo lokwahlulahlula lulawulwa kwiiNgxowa zokucoca.
Ukusuka kule hopper iyakhutshwa ngesixhobo esifanelekileyo, oko kukuthi i-Rotary valve.
Kuba kuphela iqhekeza lendawo yecebo lokucoca ulwelo lokucoca ibhegi licociwe nangaliphi na ixesha lokupha, ukuhamba okuqhubayo ngesihluzi sebhegi kumandla alinganisiweyo kuqinisekisiwe.
Iimpawu zeNkqubo yokuQokelela uthuli
Iyasebenza Uyilo ngokweMigangatho yeNkqubo yokungenisa umoya eMelika
Iingxowa zokucoca eziphezulu.
Ingxaki yasimahla yokuSebenza
Ukukhupha okuqinisekisiweyo ngaphantsi kwe-50 mg / Nm3 ngokweSicelo
Umgangatho ophezulu womoya ukuya kwilaphu (A / C)
I-Optimum Can Velocity yokuhluza ngokufanelekileyo
Ukulinganisa okusebenzayo kwexesha lokuhambisa ixesha lokucoca
Isithuba esifanelekileyo seBhegi
MOC: I-MS / SS304 / SS316